KGG အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်သမား ၁ဝဝဝ ခန့် လုပ်ငန်းခွင် အခက်ခဲဖြေရှင်းပေးရန် အချက် ၁၃ ချက်ဖြင် - Yangon Media Group
ငရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၇
KGG အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ ကုန်ထုတ်လုပ်သား ၁ဝဝဝ ခန့်လုပ်ငန်းခွင် အခက်ခဲများကို တောင်းဆိုချက် ၁၃ ချက်ဖြင့် သပိတ်မှောက်တောင်းဆိုနေကြောင်း သိရသည်။ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့သစ်စက်မှုဇုန်ရှိ KGG အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ ကုန်ထုတ်လုပ်သား ၁ဝဝဝ ခန့်သည် လူမှုဖူလုံရေးကတ်ပြုလုပ်ပေးရန်၊ အလုပ်သမားများကို သတိပေးစာနှစ်ကြိမ်မပေးဘဲ လက်မှတ်ထိုး ခိုင်းခြင်းမပြုလုပ်ရန်၊ ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားသည့် အလုပ်သမားဥပဒေများအား အလုပ်ရှင်နှင့်လုပ် ငန်းခွင်ခေါင်းဆောင်များမှ အတိအကျလိုက်နာပေးရန်၊ စက်ရုံအတွင်းရှိ အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များကို စက်ရုံလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖြင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် စသည့်အချက်များပါဝင်သည့် တောင်းဆိုချက် ၁၃ ချက်ဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ယင်းစက်ရုံရှေ့တွင် သပိတ်စခန်းဖွင့်ကာ တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်မတို့တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေမှာ ငွေကြေးနဲ့တောင်းဆို တဲ့အချက်တွေ တစ်ချက်မှမပါပါ ဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်အဆင်မပြေတဲ့ အချက်တွေချည်းပါပဲ။ စက်ရုံစဖွင့်ကတည်းက ဖူလုံရေးကြေးတွေဖြတ်ခဲ့ ပြီး ဖူလုံရေးကတ်က အခုထိမရသေးတာတွေ၊ စက်ရုံမှာအလုပ်သမား တွေသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေရတာတွေ အဲဒီလို လုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်တွေ ကိုပဲတောင်းဆိုနေတာပါ”ဟု စက်ရုံ၏ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်မဝင်း ဝင်းမော်ကပြောသည်။ လုပ်သားများ၏တောင်းဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းနေ့တွင်ပင် ဒဂုံ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ အထွေထွေအုပ် ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်၊ အလုပ်သမားများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနတို့ညှိနှိုင်းခဲ့ ကြောင်း၊ သို့သော်လုပ်ငန်းရှင်ဘက် မှ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်မည့်သူမပါ ရှိခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ ညှိနှိုင်းမှု မပြေလည်ခဲ့ဘဲ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီသို့ ပြန်လည်ချိန်း ဆိုထားကြောင်း ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေး ဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
”ပြောရရင်တော့ နားလည်မှုလွဲတာပါ။ မနက်ဖြန်ထပ်ချိန်းထားပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေတောင်း ဆိုတဲ့အချက်တွေထဲမှာ ငွေကြေး တောင်းဆိုမှုမပါပါဘူး။ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား လုပ်ငန်းခွင်အဆင် မပြေမှုလေးတွေပေါ့ဗျာ။ ဒါတွေကို နားလည်မှုလွဲနေကြတာပါ” ဟု ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအ ရာရှိ ဦးဝင်းသူကပြောသည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မေလတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် စက်ရုံဖြစ်ပြီးလုပ်သား ၁၅ဝဝ ဝန်း ကျင်ခန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ကာ လုပ်ငန်းစတင်လည်ပတ်ချိန်မှစ၍ လုပ်သားများထံမှ လူမှုဖူလုံ ရေးကြေးများဖြတ်တောက်ခဲ့သော်လည်း ယနေ့တိုင်လူမှုဖူလုံရေးကတ်များမရရှိခြင်းကြောင့် လုပ်သားများ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးကုသ ရန်လည်းခက်ခဲဖြစ်ရကြောင်း လုပ်သားများမှသိရသည်။
NCA အခြေခံ မူအပေါ်မူတည်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ဖို့လိုဟု JMC- U ဥက္ကဋ္ဌပြော
ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် အစိုးရ G to G စနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသည့် ကျောင်းကားများ လာမည့် ပညာသင်နှစ်အတ?
အသင်းနှင့် ပရိသတ်များ မက်မောတောင့်တသည့် ပွဲမျိုးဟု နည်းပြဆိုးလ်ရှား ပြောဆို
မင်းကင်းတွင် တွေ့ရှိသည့် လင်းယုန်ငှက် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ ဇီဝဗေဒတက္ကသိုလ် တစ်ခုမှ ပျံသန်း
စတီဗင်ဆီးဂဲက သေနတ်ထုတ်ပြလို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ ဂျူလီယန်နာ
ကျုံးပတ်လည် လမ်းများတွင် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ထီရောင်းချခွင့် လိုင်စင်မရှိဘဲရောင်းပါက ဒဏ်ငေ?
ရွှေလီမြို့တွင် ကျင်းပမည့် (၁၇)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-တရုတ်ဆွေမျိုး ပေါက်ဖော်ပွဲသို့ မြန်မာအဖွဲ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလေယာဉ် ယူကရိန်းမှ ကုန်များတင်၍ ဂျာမနီသို့ ပထမဆုံး ထွက်ခွာ